बच्चालाई नुहाउने समयमा ध्यान नदिँदा धेरै प्रकारको समस्या – Milappost
बच्चालाई नुहाउने समयमा ध्यान नदिँदा धेरै प्रकारको समस्या
काठमाडौँ- के तपाईं आफ्नो बच्चालाई नुहाइदिँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईंले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने बच्चालाई नुहाउने समयमा ध्यान नदिँदा धेरै प्रकारको समस्या निम्तिन सक्छ ।
बच्चा सुत्ने समय भएको बेला नुहाउनु हुँदैन, बच्चालाई भोक लागेको बेला नुहाउनु हुँदैन् । बच्चालाई धेरै समय लगाएर नुहाएमा चिसो लागेर बिरामी पनि पर्न सक्छ । त्यसकारण बच्चा नुहाउँदा विशेष सावधानी र ख्याल राख्नु आवश्यक हुन्छ ।कहिले नुहाउने ?
खासमा बच्चालाई सुर्योदय भन्दा पहिले वा बिहानको समयमा नुहाउनु सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । किनभने बिहान नुहाएपछि दिउँसो घाम चर्कदै जान्छ । र बच्चालाई नुहाएर घाममा राख्न सकिन्छ । यो पूरानो मान्यताको पछाडि सायद केही तर्क अवश्य छ ।
नवजात शिशुले शरीरको तापक्रम नियन्त्रित गर्न सक्दैन र बच्चालाई चाँडै चिसो लाग्न सक्छ । बच्चालाई चिसो भएपछि उनीहरुले नुहाउँदा आनन्द लिन सक्दैन् । त्यसैले दिउँसो घाम चर्कदा बच्चालाई नुहाउँदा न्यानो हुन्छ र बच्चालाई आरामदायक तरिकाले नुहाइदिन सकिन्छ ।
कस्तो हुनुपर्छ पानीको तापक्रम ?
नुहाउनको लागि हल्का तातो पानी प्रयोग गर्ने । बच्चालाई नुहाउँनको लागि पानीको तापक्रम ३८ डिग्री सेल्सियस वा १००.४ डिग्री फहरनहाइटको तापक्रम चाहिन्छ । यदि तपाईसँग थर्मोमिटर छैन्, भने कुहिनाले पानीको जाँच गर्न सकिन्छ । कुहिनामा हल्का तातो महशुस हुनुपर्छ, धेरै तातो होइन ।
बच्चालाई नुहाइदिनु भन्दा अगाडि सबै तयारी गर्ने । पानी हल्का मनतातो बनाउने ताकी बच्चालाई चिसो नलागोस् ।
हप्तामा हरेक दिन साबुन वा स्याम्पु लगाउनु जरुरी हुँदैन् । हप्तामा दुई वा तीन पटक मात्र यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
जुन कम्पनीको प्रोडक्ट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङ डेट आदि राम्रोसँग हेर्नुपर्छ । त्यहाँ दिएको निर्देशनहरु पनि राम्रोसँग पढेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
नुहाउनुभन्दा अगाडि बच्चालाई मसाज गर्नुपर्छ । नुहाइसकेपछि पनि बच्चाको छालामा मोस्चरराइजर लगाउन नबिर्सनुहोस् । जसले गर्दा बच्चालाई चिलाउने वा पोल्ने हुँदैन।
साबुनको प्रयोग गर्नुभन्दा अघि के गर्ने ?
पहिलो पटक बच्चाको साबुन वा स्याम्पुले नुहाउन लागेको हुनुहुन्छ भने उसको छालामा साबुन लगाएर हेर्ने ताकी बच्चालाई एलर्जी वा अन्य प्रकारको नोक्सान हुन्छ कि हुँदैन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ । छालामा रातो देखिएमा त्यो प्रोडक्ट प्रयोग नगर्ने ।
६ महिनाभन्दा कम उमेरको शिशुलाई साबुनले रगडेर पनि नुहाउनु हुँदैन् । साबुनलाई हातमा लगाएर शिशुको छालामा लगाइदिनुपर्छ ।
सुगन्धयुक्त साबुनको प्रयोगबाट बच्नुहोस् । जुन साबुनबाट बास्ना अधिक आउँछ त्यसमा केमिकल धेरै हुन्छ जसले बच्चाको कोमल छालामा नकारात्मक असर गर्छ ।
बच्चाको छालालाई धेरै रगड्नु आवश्यक हुँदैन् । किनभने बच्चाको छालामा धूलो जमेको हुँदैन् त्यति फोहोर पनि हुँदैन् । सिर्फ मसाज गर्ने र नुहाइदिए पुग्छ ।– एजेन्सीको सहयोगमा ।